QIIRO: Waa Horyaalka Aduunka Ugu Fiican & Garsoorka Ugu Liita, Waa Danbiilayaal- Tababaraha England Ugu Da'da Wayn Oo Dhulka Jiid Jiiday Garsoorka Premier league Kadib Ceebtii Kulankii Chelsea. - Gool24.Net
QIIRO: Waa Horyaalka Aduunka Ugu Fiican & Garsoorka Ugu Liita, Waa Danbiilayaal- Tababaraha England Ugu Da’da Wayn Oo Dhulka Jiid Jiiday Garsoorka Premier league Kadib Ceebtii Kulankii Chelsea.
Tababaraha horyaalka Premier league ugu da’da wayn ee Neil Warnock ayaa garsoorka Premier league hiilfaha ugu qaaday canaan iyo erayo aan hore looga baran tababarayaasha Premier league kadib markii kooxdiisa Cardiff City la dhacay kulankii Chelsea isla markaana ay garsoorku ceeb wayn ku dhex dabaasheen go’aanadii muranka badan dhaliyay.
Tababaraha kooxda Cardiff City ee Neil Warnock oo ah tababaraha ugu da’da wayn kubada cagta England isla markaana 70 sanadood iyo bilo jiray ayaa danbiilayaal ku tilmaamay garsoorayaashii hayay kulankii Chelsea iyo Cardiff wuxuuna horyaalka Premier league ku sifeeyay horyaalka aduunka ugu fiican oo haysta garsoorayaasha ugu liiita.
Markii ay soo dhamaatay ciyaartii Cardiff City iyo Chelsea, tababare Neil Warnock ayaa inta uu labadiisa gacmood kalyaha ku qabsaday waxa uu garsoorayaasha hortooda ku sugayay inta ay ciyaartoyda baxaysay wuxuuna kadib isla hortaagay sacab uu si ciil iyo jees jees ah ugu durayay ceebtii ay dhex quuseen kulankan.
Neil Warnock oo si wayn uga cadhaysan dhibaatadii ay garsoorku kooxdiisa u gaysteen ayaa yidhi: “Waa horyaalka aduunka ugu fiican laakiin waa garsoorka ugu liita. Waxay ugu dhawaan la mid tahay in ayna micno lahayn cida aad la ciyaaraysaa, balse ay tahay cida dhex dhexaadinsaysa iyo cida calanka haynaysa”.
Neil Warnock oo cadhadiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxay samaynayaan qaladaad khaas ah, laakiin heerkan waxaa waajib ahayd in ayna dhicin. Ma aha marka aanad wax badan ciyaarta dhigin. Waa bukaan, waa naf burburin, waxay ciyaartoydaydu dareemayaan sidii oo ilkaha laga laagay. Anigu uma qalmo garsoorayaasha la midka ahaa maanta, wax cudur daarasho ahi ma jirto, waa danbiilenimo!”.
Neil Warnock ayaa intaa kadib kaga qiiraysiiyay kubbada cagta aduunka wuxuuna yidhi: “Maxay tahay sababta aan u shaqaynayo aniga oo ay da’daydu tahay 70 sano jir ee ay waxa sidan oo kale ahi u dhacayaan? Ma aha wax markasta ah, waxaa iga lumay hadalkii. Maxaa maskaxdayda ka dhex socda? Ma abaal gudkaygii sanadihii la soo dhaafaybaa?”
Neil Warnock oo sii wata erayada qiirada iyo cadhadu ka muuqdaan ayaa yidhi: “Waxaa qasab igu noqotay in aan xamaamka tago, waan isqaniinay, laakiin taas wiilasha umaan sheegin, haddii uu qof ka shakisanaa maanta ka hor, VAR ayaa jawaabta iyaga caawin karta noqon doona”.
Halkan hoose ka daawo falcelintii tababare Neil Warnock ee garsoorkii ceeboobay ee kulankii Chelsea iyo Cardiff City iyo qaabkii uu dareenkiisa ugu muujiyay.
Lama oga haddii maamulka Premier league ay ciqaabi doonaan garsoorkii kulankii Chelsea iyo Carddif City iyo haddii Neil Warnock loogu dari doono dacwad lagu soo oogi karo kadib erayada aadka u adag ee uu adeegsaday.